जनार्दशन शर्माको टिप्पणी-मलाई प्रधानमन्त्रीले किन हटाउने ?, म चुनावसम्म रहन्छु (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
जनार्दशन शर्माको टिप्पणी-मलाई प्रधानमन्त्रीले किन हटाउने ?, म चुनावसम्म रहन्छु (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 2022 June 20, 9:12 am
काठमाडौं, ६ असार । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले देश र जनताको हित हुनेगरि बजेट ल्याएको र जनस्तरबाट प्रशंसा नै पाएको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नभएको जिकिर गरे । हिजो (आइतबार) राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा जानेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए । उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि दाबी गरे । सरकारले कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने पनि शर्माको दाबी छ । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कुनैपनि हालतमा अप्ठ्यारोमा नजाने बताए । उनले अहिले मुलुकको सबै संकट मोचन हुनेगरि बजेट आएको स्पष्ट पारे ।
उनले आफूले ल्याएको बजेटबाट सबै क्षेत्र खुशी रहेको सुनाए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा आफूले बजेट ल्याएको शर्माको भनाई छ । उनले आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा बजेट ल्याएको कारण मन्त्रीबाट नहटाउने दाबी गरे ।
पत्रकार धमलाले तपाईँलाई त प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीबाट हटाउँदै हुनुहुन्छ अरे नि ? भनेर सोधेको प्रश्नमा जंगिदै भने-“मलाई किन हटाउने ? बाहिर चर्चा भएर हुन्छ ? म त गठबन्धनमा छु, ममाथि हमला गरेर गठबन्धन तोडिन्छ भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हो । म चुनावसम्म अर्थमन्त्री रहन्छु ।”
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा संसदीय समितिले चासो राख्नु अपराध होइनः पवित्रा निरौला
काठमाडौं, ६ असार । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह,
पेट्रोलमा २१ र डिलेलमा २७ रूपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं, असार ६ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा भारी वद्धि गरेको छ। आइतबार
काठमाडौं, ५ असार । लौरो र राजकुमार सक्कली कि नक्कली
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ऋषि धममलासँगको अन्तवार्तामा भनेः मैंले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन
काठमाडौं, ५ असार । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्
देउवाले यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्ने, को आउलान् को जालान्
काठमाडौं, ५ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्ने सम्भावना रहेको
नक्कली मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाएर सात करोडको जग्गा किर्ते गरि ठगी गर्नेहरु पक्राउ (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ५ असार । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुशन्धान ब्यूरोले सात करोडको जग्गा किर्ते गरि ठगी
जनकपुरधामका उपप्रमुख साहमाथि चप्पल प्रहार
काठमाडौं, ५ असार । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहमाथि आइतबार चप्पल प्रहार भएको छ। बेलागाउँस्थित
संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ५ असार । संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नुको
काठमाडौं, ६ असार । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले देश र जनताको हित हुनेगरि बजेट ल्याएको
५ देखि ११ वर्षभित्रका बालबालिकालाई असार ९ कोरोनाविरुद्ध खोप
काठमाडौं, असार ६ । नेपालमा पहिलोपटक ११ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिन मिल्ने कोभिड १९ विरुद्धको खोप
मन्त्री फेर्न कांग्रेस, माओवादीको आलटालः नेपाल
काठमाडौं, असार ६ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको मन्त्री हेरफेर गर्न